iPhone 5C Li-ion Battery rutsigiro iOS 12 update China Manufacturer
Tsanangudzo:IPhone 5C Li-ion Battery,IPhone 5C Battery IOS,IPhone 5C Li-ion Battery IOS
Home > Products > iPhone Battery > iPhone 5C Battery > iPhone 5C Li-ion Battery rutsigiro iOS 12 update
Muenzaniso Nha.: iPhone 5C
Kutakura: Land,Air,UPS/Fedex express
Nzvimbo Yokutanga: Guangdong Province
Itsva 0 cycle iPhone 5C Kudzoka Li-ion Battery tsigiro iOS 12 update
Wedzera iPhone yako 5C Li-Ion Bhabheri hupenyu uchitsiva nehutano 0 purogiramu iPhone 5C kutengesa bhetri. Yakagadzirwa kubva ku 100% yakachena cobalt cell ne 0 cycle, inogona kuchengeta 80% simba shure kwe 400 cycle times. Bhuku rakakwirira rekuchengetedza bhomba rinogona kuita kuti hurumende irege kutambanudza bhatiri yepabhesi pasi pe10 -30% uye ivhare pakarepo. Brandnew iPhone 5C Li-ion Battery Replacement ichawedzera hupenyu hwomutambo wako kupfuura makore mashanu, yakakodzera AC adapter uye USB Kutengesa Cable haisi yepamusoro. Sezvo Apple iOS system 12 yakashandurwa, iPhone 5C Battery iOS 12 inotsigirwa yakachengeteka. Kwete kungobhadhara zvakapfurikidza asiwo kuderera kwemafivha, zvisinei, kuongorora kwakakwana kwebheteri simba nekudzivirira IC nguva refu yeupenyu.
-Net Weight: 40g / pcs - FPC kubatanidza: Laser Welding * Tsigira dhiyabhorosi dhesi yekutanga
-MOQ: 100pcs zvinhu zvose - Kushanda kushanda: 0-50 ℃ * Kutsigira APPLE iOS inoshandiswa
-Warranty: Mwedzi 12 - 100% Yakachena Cobalt Cells * Yakapera CE, ROHS, PSE, FCC, MSDS, UN38.3
- Product T echnology Kuenzanisa -
Automatical Production Lines Vamwe Manmade Production Lines
① Kuumba sero re ectrode nzeve ② Kudzivirira bhokisi laser welding ③ Silk-screen printin
④ Kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuita ⑤ iPhone kuenzanisa kuenzanisa ⑥ Package
1. Mubvunzo: Chirango chii?
A: Kana wakagamuchira bheteri pane chero dambudziko re:
a.disable kubhadhara / kubudisa b.lower capacity c.battery kuwedzera.
isu tinovimbisa chero zvakataurwa pamusoro apa matambudziko, achakusunungura uye anokutumira iwe mutsva mumwedzi gumi nembiri Kunze kwevanhu vakagadzirwa.
2. Mubvunzo: Zvingaita here kugadzira zvishoma kurongedza kambani yako?
A: HERE, minimun yedu inorayira kutenga, MOQ is 100pcs.
MOQ yeOEM oda ndiyo 1000pcs chimwe chinhu, kana tichakurukurirana zvichienderana nechikumbiro chako che OEM.
3. Q: Iwe une zvivako zvezvibereko zvako?
A: Hongu, tinogona kupa CE, RoHS, PSE, FCC, MSDS uye UN38.3.
4. Mubvunzo: Ndeipi nzira yakanakisisa yekuendesa bheteri ye iPhone?
A: Kazhinji isu tinotakura neUPS inotsanangura (nzira inonyanya kutsvaga), kana nekutakura kwemhepo (kunobva kune imwe nzvimbo, mazuva gumi ekushanda) uye kutakura kwegungwa (zvichienderana nechinzvimbo, mazuva anenge makumi maviri emabasa).
5. Q: Unotsigira LOGO yakagadzirwa here?
A: Hongu, MOQ: mhando imwe neimwe 100pcs zvishoma.
6. Mubvunzo: Iriya yebhatori ine 0 njodzi here?
A: HERE, zvese zvatinowana nemutambo we-0, zvishandiso zvitsva zvesero, FPC, IC uye bhokisi rokudzivirira.
Yakakwirira neAAA yegorosi, hupenyu hwehupenyu hunopfuura nguva 500 hunoramba huchiita 80%.
Brandnew iPhone 5C Inotsiva Lithium-ion Battery Bata Ikozvino
iPhone 5C Li-ion Battery rutsigiro iOS 12 update Bata Ikozvino
New iPhone 5C Battery Kuchinja kwekare Bata Ikozvino